महाराष्ट्रमा राजनीतिक उथलपुथल : उद्धव ठाकरेले मुख्यमन्त्रीको निवास छोडे | Ratopati
महाराष्ट्रमा राजनीतिक उथलपुथल : उद्धव ठाकरेले मुख्यमन्त्रीको निवास छोडे
शिवसेना नेता सञ्जय राउतले बुधबारसम्म आफू पार्टीका विद्रोही नेताहरूसँग सम्पर्कमा रहेको र कोही पनि नगएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, महाराष्ट्रमा राजनीतिक उथलपुथलको तेस्रो दिन पनि विद्रोही मन्त्री फर्केका छैनन् । शिवसेना नेता एकनाथ शिन्देको नेतृत्वमा गुवाहाटीको एउटा होटलमा करिब ३०-४० विधायकहरू उपस्थित छन्।
यस अर्थमा, तथ्याङ्कहरू मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेको पक्षमा छैनन् । उद्धव ठाकरे गठबन्धन सरकार बचाउन संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ। बुधबार अबेर राति ठाकरे आफ्नो परिवारसहित मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिरिएर मातोश्री फर्किएका थिए। ठाकरे पत्नी रश्मी, छोराहरू आदित्य र तेजसका साथ मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्केका थिए। यस क्रममा शिव सैनिकले मातोश्री नपुगेसम्म चारैतिर नाराबाजी गरेका थिए ।
बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि राज्यलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्ना विधायक र कार्यकर्ताले चाहेमा आफूले राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका थिए । राजनीतिक उथलपुथलपछि उनको यो पहिलो सम्बोधन थिए ।
उद्धव ठाकरेले आफ्नो सम्बोधनमा के भने ?
शिव सेनाका वरिष्ठ नेता एकनाथ शिन्देको विद्रोह पछि पहिलो पटक महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री तथा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेले फेसबुक लाइभ मार्फत जनतासँग कुरा गरेका थिए । उद्धव ठाकरेले भने, ‘मानिसहरूले भनेका थिए कि मुख्यमन्त्रीले भेट्दैनन्। शिवसेना कसले चलाइरहेको छ ? मेरो शल्यक्रिया भयो, त्यसले गर्दा मैले मानिसहरूलाई भेट्न सकिनँ। त्यो समय धेरै गाह्रो थियो। म अस्पतालबाट अनलाइन काम गरिरहेको थिएँ । शिव सेना र हिन्दुत्व सम्बन्धित शब्द हुन्। शिवसेनालाई हिन्दुत्वबाट अलग गर्न सकिँदैन, किनभने शिव सेना प्रमुखले हिन्दुत्व हाम्रो सास हो भन्ने मन्त्र दिएका छन्।’
उद्धव ठाकरेले आफू मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको तर यसका लागि शिवसेनाका विधायकहरूले उनको अगाडि आएर बोल्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'एकनाथ शिन्देलाई सुरत गएर कुरा गर्न के आवश्यकता थियो ? केही विधायकहरू यहाँ छैनन्। केही मानिसहरूले उनीहरू फर्कन चाहन्छन् भनेर फोन गरिरहेका छन्। मैले सधैँ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छु। म मुख्यमन्त्रीको पद छोड्न तयार छु। तर मपछि कुनै शिवसैनिक मुख्यमन्त्री बने भने खुसी हुनेछु। हराएका विधायक यहाँ आएर मेरो राजीनामा पत्र लिएर राजभवन जानुपर्छ।'
एकनाथ शिन्देले ट्वीट गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्- एकनाथ शिन्दे विद्रोही नेतासँग गुवाहाटीको एउटा होटलमा छन् । एकनाथ शिन्देले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘पछिल्लो साढे दुई वर्षमा महाविकास अगाडि सरकारले घटक दललाई मात्रै फाइदा गरेको छ र शिवसैनिकले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।
अर्को ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, 'पार्टी र शिव सैनिकको अस्तित्वको लागि असामान्य मोर्चाबाट बाहिर आउन आवश्यक छ। महाराष्ट्रको हितमा अब निर्णय लिनु आवश्यक छ।'
शिन्देको क्याम्पमा थप विद्रोही नेताहरू सामेल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि राति अबेर राति थप चार जना विधायक गुवाहाटीको र्‍याडिसन ब्लू होटल पुगेका थिए।
यो पक्कै पनि भाजपाको लागि महाराष्ट्रमा सत्तामा फर्कने अवसर हो तर भाजपाले अझै आफ्नो कार्ड खोलेको छैन। बीजेपी अझै एकनाथ शिन्देको अर्को कदम पर्खिरहेको छ। एक बीजेपी नेताले भने, 'बिहीबार सम्म, धेरै शिव सेना विधायकहरू शिन्दे गुटमा सामेल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्धवको साथमा केही विधायक मात्रै रहन्छन् । उनले आफ्नो शक्ति गुमाएका छन्। यो झट्काले भाजपालाई बाटो सजिलो हुनेछ।'